Ciidamada Dowlada oo Baaritaano ka sameeyay qaar ka mid ah Degmooyinka G.Banaadir. – XAMAR POST
By Mohamed Ahmed Last updated Sep 11, 2017
Ciidamo ka Tirsan Kuwa Dowlada Federaalka Soomaliya ayaa Xalay Howlgalo Baaritaan ah ka Sameeyay qaarka ka mid ah Degmooyinka Gobalka Banaadir,sida Waabari dharkeenley iyo qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Baaritaanka ay sameeyeen Ciidamada Dowlada ayaa ka dambeeyay kadib markii Xalay Degmada Waabari ee Gobalka Banaadir lagu Dilay wiil dhalin yarada,inkastoo aan la garan magaciisa wiilkaasi la dilay.
Gudoomiye ku xigeenka amniga Degmada waabari ee Magaalada Muqdisho Cabdi wahaab Maxamed Maxamuud ayaa Sheegay in Wiil dhalin yaro ah lagu dilay Degmada,islamarkana Ciidamada Dowlada ay Baaritaano ka Sameeyeen Xaafadaha Degmadaasi.
Waxaa uuna Sheegay in ilaa hada aan gacanta lagu soo dhigay kooxdii dilka ah u geysatay Wiilkan dhalin yarada ah.
Degmooyinka Gobalka Banaadir ayaa Mudooyinkii Dambe waxaa ku soo badanayay Dilalka Qorsheysan ee loo geysanayo Dadka Rayidka ah iyo Ciidamada Dowlada Soomaaliya,inkastoo inta badan Dilalkasi ay sheegtaan Masuuliyadooda Al-Shabaab.
Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta ka doodaya arrinta Qalbi-dhagax